Tekisi yeramangwana chikamu chezvino (III): myTaxi | IPhone nhau
Tekisi yeramangwana chikamu chezvino (III): myTaxi
Mushure mekutaura muzvikamu zviviri zvekutanga zveiyi miniseries nezve mafomu maviri asina chekuita neyakajairika tekisi, ikozvino yave nguva yeanoda kugadzirisa matekisi ehupenyu hwese. Iyo app myTaxi Ndiyo mhinduro yakanakisa munyika yetekisi kune vamwe vese vanopikisa, uye chokwadi ndechekuti haina kushata zvachose. Tiri kuzoiongorora kuti tione zvayakanakira nezvayakaipira nekutarisa pane akakosha maficha.
1 Tekisi yazvino
Hwaro hwepurogiramu iyi tekisi yeupenyu hwese, sezvo dzichava mota dzatinoshandisa kufamba kana tangobata rwendo kuburikidza nharembozha. Nezve maitiro ekutarisira rwendo, zvese zvakangofanana zvakafanana nemamwe maapplication akadai seUber kana Lyft, kusanganisira kubhadhara kuburikidza nharembozha uye kureruka kwekuzvibata, kubvuma mukuwedzera kune yechinyakare kubhadhara mukana wekubhadhara zvese kiredhiti kana kiredhiti kadhi uye PayPal kuburikidza neapp.
Zvichienzaniswa nedzimwe nzira dzemazuva ano dzakadai saUber naCabify, myTaxi ine mukana unove unonakidza kune vamwe vashandisi: nekushanda pasi pematekisi echinyakare, mota dzinogona kufamba Migwagwa yeTekisi, chimwe chinhu icho-asiri-tekisi anotakura vafambi anotakura asingatenderwe Izvi zvinofungidzirwa kuti zvinoshandura mukusvika kwairi kuenda pakutanga.
Iko kushanda kwebasa maererano nenguva on muy Bueno. Mumadhorobha makuru kusvika kwematekisi kunzvimbo yedu kwakakurumidza uye hatitombofaniri kumirira, chimwe chinhu chinokosheswa, kunyange zvichizikanwa kuti mushure mekushandisa kumwe takasangana nekufungidzira kwekusvika kwekusanzwisisika, kunyange izvi zvichingoitika kazhinji mhando iyi mafomu.
Basa reCalculator iro isu ratinogona kuwana mumamiriro ekushandisa rinonakidzawo, nekuti rinotibvumira kuwana mutengo unofungidzirwa werwendo uye inowanzo kuve iri padyo neichoicho, kunyangwe ichigona kusiyana maererano nemamiriro ezuva rega rega.
Padanho reiyo interface hapana chekushora, iri chaizvo, ane mavara akachena uye zviri nyore kwazvo kupusa kwekushandisa mukushandisa kwerudzi urwu. Saizvozvo, iko kushanda nguva dzese kwakaringana, pasina lag yerudzi rupi zvarwo uye kumutsiridza nemazvo nguva dzese sekureba sekunge tine nhare inoshanda kana WiFi.
Ziva nezve kunyoresa: Unogona kunyoresa zvakajairika pasina kukwidziridzwa kiredhiti, kana neimwe nzira tora mari yemahara parwendo rwako rwekutanga nekupinda kodhi "carlos.san57".
YEMAHARA IZVOZVO (mytaxi)vakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Tekisi yeramangwana chikamu chezvino (III): myTaxi
Podcast 8x22: Iyo tarisiro inokura neiyo iPhone 8